Hirshabelle oo ka hadashay Qarax ka dhacay Maanta Balcad. – Hornafrik Media Network
Wasiirka Warfaafinta Maamul Goboleedka Hirshabelle Mahad Xasan Cismaan ayaa ka hadlay weerar qarax miino ah oo maanta ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Qaraxan ayaa ahaa mid lagula beegsaday kolonyo gaadiid ah oo galbinaysay wafdi ka socday wasaarada arrimaha gudaha dowlada Federalka iyo wafdi ka kooban Wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada dalka.
Wasiirka Warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Mahad Xasan Cismaan ayaa weerarka qaraxa ku tilmaamay mid fashilmay oo ay mas’uuliyiintii lala beegsaday ay ka badbaadeen.
Hase yeeshee wasiirka ayaa sheegay in qaraxan uu ku shahiiday mid ka mid ah ciidamada galbinaysay wafdiga waxana uu sheegay in askarigan uu yahay mid shahiid ah uuna geeriyooday isagoo sooman.
“Shir ay yeelanayaan wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada Hirshabelle ayaa beri ka furmi doona magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedyada loomana hakin doono falalka ay argagaxisada maleegayaan.”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Hirshabeelle.
Howlgalo ay sameeyeen ciidamada ammaanka degmada Balcad ayaa la sheegay inay ku soo qabteen qof loogaga shakisan yahay inuu ka dambeeyay miinada lagu qarxiyay kolonyada ay la socdeen wafdi saaka ka tegey magaalada Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Hirshabelle Mahad Cismaan ayaa xaqiijiyay in la soo qabtay ninkan isla markaana ay baaritaan ku sameyn doonaan laamaha ammaanka.
Kolonyada gaadiidka ah ee lala beegsaday qaraxa ayaa mas’uuliyiintii la socotay waxaa ka mid ahaa Xoghayaha joogtada ah ee Wasaarada Arrimaha Gudaha Yaxye Cali Ibraahim iyo wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koofurgalbeed Soomaaliya.